देश कसले चलाइरहेको छ ?, कसको भरमा छ मुलुक ? | Seto Khabar
देश कसले चलाइरहेको छ ?, कसको भरमा छ मुलुक ?
काठमाडौं – देश कसले चलाइरहेको छ ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कसैलाई पनि कार्यबाहक नदिई चिन भ्रमणमा निस्केपछि अहिले यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारको दैनिक कामकारवाही सञ्चालनार्थ मन्त्रिपरिषका बरिष्ठ सदस्यलाई कार्यबाहक दिने परम्परा थियो । तर योपल्ट प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि कार्यबाहक नतोकी विदेश गए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।